မြန်မာ့ဂီတလောကမှာ အရမ်းဟော့ဖြစ်နေတဲ့ တေးရေး"ဝေကြီး"ရဲ့ သီချင်းကောင်းများ - For her Myanmar
ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ရင်းပြီး နားထောင်လို့ကောင်းမယ့် သီချင်းတွေချည်းပါပဲ
ဘယ်နေရာပဲသွားသွား နားထဲနားကြပ်လေးထည့်ပြီး သီချင်းနားဆင်တတ်တဲ့ ယောင်းတွေအတွက် ခံစားချက်ရသအပြည့်အဝ ပေးနိုင်မယ့် တေးသီချင်းလေးတွေ စုစည်းပေးမယ့်အလှည့်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှ်ိလာပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မင်မင်က မြန်မာတေးသီချင်းလောကမှာ အရမ်းဟော့ဖြစ်နေတဲ့ တေးရေးဝေကြီးရဲ့ သီချင်းတွေကို စုစည်းပေးသွားမှာပါ… ယောင်းတို့ရင်ထဲကို တိုက်ရိုက်ထိမှန်မယ့် တေးသီချင်းတွေချည်းပဲမို့ ဘယ်သီချင်းတွေလဲဆိုတာကို မင်မင်နဲ့ အတူကြည့်လိုက်ရအောင်….
အသည်းကွဲအထိမ်းအမှတ် ( ဖြူဖြူဟန် )
အခုတလော ဘယ်နားသွားသွား ကြားနေရပြီး နှုတ်ဖျားမှာ တသသမြည်တမ်းဖြစ်နေတဲ့ တက်သစ်စတေးသံရှင် ဖြူဖြူဟန်ရဲ့ အသည်းကွဲအထိမ်းအမှတ်သီချင်းလေးကတော့ တေးရေးဝေကြီး ခံစားရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ချစ်သူကိုစောင့်မျှော်နေသေးကြောင်း “ နောက်ထပ်တစ်ခေါက်အသည်းကွဲရမယ့် အဖြစ်အပျက်ကို လက်ခုပ်တီးကာ ကြိုဆိုနေသလိုမျိုး “ ဆိုပြီး ဖြူဖြူဟန်က ခံစားသက်ဝင်မှု ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုထားတာမို့ ယောင်းတို့ရင်ထဲကို ခံစားချက်တစ်စုံတစ်ရာ ကျန်ရစ်နေစေမယ့် သီချင်းကောင်းဖြစ်မှာပါနော်….
Related Article >>> ယောင်းတို့နှလုံးသားကို ထိရှသွားစေမယ့် Joox Myanmar Top Chart က သီချင်း(၅)ပုဒ်
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုပါက >>> http://bit.ly/2WK7oFQ
ဘောင်မဝင်တဲ့ကောင် ( နေမင်းအိမ် )
ချစ်သူက ပစ်ချသွားခဲ့တာတောင် မမုန်းနိုင်မမေ့နိုင်တဲ့ အသုံးမကျတဲ့ကောင်အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် အားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုအပြည့် ပေါက်ကွဲထွက်ထားတဲ့ သီချင်းလေးကိုတော့ တေးရေးဝေကြီးက ရေးဖွဲ့ပေးထားတာပါ။ “ တစ်ခါတလေ ငါ့ကိုငါမုန်းတယ် ၊ နင့်ကိုအချစ်ဆုံးတဲ့ ၊ … ငါဘာမှအသုံးမကျတဲ့ကောင် ၊ လူဖြစ်ပြီးအကျိုးမရှိတဲ့ကောင် ၊ နင်သေဆိုသေ ၊ ရှင်ဆိုရှင် ၊ အသက်မပါလာတဲ့အကောင်” ဆိုတဲ့စာသားတွေကို နေမင်းအိမ်ရဲ့ အသံချိုချိုလေးနဲ့ သီဆိုထားတာမို့ အရမ်းနားထောင်လို့ ကောင်းတဲ့သီချင်းလေးပါနော်…..
ဒီလောက်ပါပဲ ( ဇင်အောင် )
ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ ရက်စက်သွားပုံကို သဘာဝတရားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး တေးရေးဝေကြီးက ခပ်သွက်သွက်ပုံစံလေးနဲ့ ရေးဖွဲ့ပေးထားတာပါ။ “ နေက အရှေ့ဘက်ထွက်တယ် ဒါပေမဲ့ အနောက်ရွေ့သွားတယ် ၊ နင်က ချစ်တော့ ချစ်တတ်တယ် ဒါပေမဲ့ ရက်စက်သွားတယ်၊ မကြင်နာလို့ ငါ့ကို ထားသွားတဲ့အခါ မင်းနှစ်သက်ရင် ငါပျော်ပါတယ် “ ဆိုပြီး ဇင်အောင်က စာသားတစ်လုံးချင်းစီကို ပီပီသသလေးသီဆိုသွားတာက အတော်လေးကို နားထောင်ကောင်းတဲ့ သီချင်းပါပဲနော်…
Related Article >>> ဟီရိုးအင်းလို စွဲလမ်းစေမယ့် သီချင်းတွေနဲ့ စင်မြင့်ထက်က Lana Del Rey
မတော်တဆ ( ကျော်ဇင်မင်း )
ဒီသီချင်းကတော့ အရမ်းတွေထိရှလွန်းလို့ မင်မင်အထပ်ထပ် နားထောင်မိနေတဲ့ သီချင်းလေးပါ.. တေးရေးဝေကြီးရဲ့ စာသားတစ်ကြောင်းစီတိုင်းက နားထဲတင်မက ရင်ထဲပါ စွဲလွန်းလို့ မဖြစ်မနေ နားထောင်ကြည့်သင့်တဲ့ သီချင်းလေးပါ ယောင်းရေ… “ ငါ့လောက် ချစ်တဲ့သူလေ… နင်ရှာဖွေကြည့်ပါ… တကယ်လို့များ မတော်တဆဆုံတဲ့အခါ အဆင်မပြေရင်တောင် နည်းနည်းတော့ပြုံးပြ”ဆိုပြီး ချစ်သူနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား မဖြစ်သေးတဲ့ အခြေအနေကို ကျော်ဇင်မင်းရဲ့ ကြည်လင်စူးရှတဲ့ အသံလေးနဲ့ သီဆိုပေးထားတာမို့ နားထဲစွဲလွယ်တဲ့ သီချင်းကောင်းလေးပါနော်…
ဒီတစ်ခေါက်မှာ မင်မင်စုစည်းပေးတဲ့သီချင်းလေးတွေက ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်.. နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက်စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်…
ရငျဘတျကွီးနဲ့ ရငျးပွီး နားထောငျလို့ကောငျးမယျ့ သီခငျြးတှခေညျြးပါပဲ
ဘယျနရောပဲသှားသှား နားထဲနားကွပျလေးထညျ့ပွီး သီခငျြးနားဆငျတတျတဲ့ ယောငျးတှအေတှကျ ခံစားခကျြရသအပွညျ့အဝ ပေးနိုငျမယျ့ တေးသီခငျြးလေးတှေ စုစညျးပေးမယျ့အလှညျ့ကို ပွနျလညျရောကျရှိလာပါပွီ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ မငျမငျက မွနျမာတေးသီခငျြးလောကမှာ အရမျးဟော့ဖွဈနတေဲ့ တေးရေးဝကွေီးရဲ့ သီခငျြးတှကေို စုစညျးပေးသှားမှာပါ… ယောငျးတို့ရငျထဲကို တိုကျရိုကျထိမှနျမယျ့ တေးသီခငျြးတှခေညျြးပဲမို့ ဘယျသီခငျြးတှလေဲဆိုတာကို မငျမငျနဲ့ အတူကွညျ့လိုကျရအောငျ….
အသညျးကှဲအထိမျးအမှတျ ( ဖွူဖွူဟနျ )
အခုတလော ဘယျနားသှားသှား ကွားနရေပွီး နှုတျဖြားမှာ တသသမွညျတမျးဖွဈနတေဲ့ တကျသဈစတေးသံရှငျ ဖွူဖွူဟနျရဲ့ အသညျးကှဲအထိမျးအမှတျသီခငျြးလေးကတော့ တေးရေးဝကွေီး ခံစားရေးဖှဲ့ထားတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျပါ။ ခဈြသူနဲ့ အဆငျမပွဖွေဈနတေဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျက ခဈြသူကိုစောငျ့မြှျောနသေေးကွောငျး “ နောကျထပျတဈခေါကျအသညျးကှဲရမယျ့ အဖွဈအပကျြကို လကျခုပျတီးကာ ကွိုဆိုနသေလိုမြိုး “ ဆိုပွီး ဖွူဖွူဟနျက ခံစားသကျဝငျမှု ကောငျးကောငျးနဲ့ သီဆိုထားတာမို့ ယောငျးတို့ရငျထဲကို ခံစားခကျြတဈစုံတဈရာ ကနျြရဈနစေမေယျ့ သီခငျြးကောငျးဖွဈမှာပါနျော….
Related Article >>> ယောငျးတို့နှလုံးသားကို ထိရှသှားစမေယျ့ Joox Myanmar Top Chart က သီခငျြး(၅)ပုဒျ
ဘောငျမဝငျတဲ့ကောငျ ( နမေငျးအိမျ )
ခဈြသူက ပဈခသြှားခဲ့တာတောငျ မမုနျးနိုငျမမနေို့ငျတဲ့ အသုံးမကတြဲ့ကောငျအနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျ အားမလိုအားမရဖွဈနတေဲ့ ခံစားခကျြတှကေိုအပွညျ့ ပေါကျကှဲထှကျထားတဲ့ သီခငျြးလေးကိုတော့ တေးရေးဝကွေီးက ရေးဖှဲ့ပေးထားတာပါ။ “ တဈခါတလေ ငါ့ကိုငါမုနျးတယျ ၊ နငျ့ကိုအခဈြဆုံးတဲ့ ၊ … ငါဘာမှအသုံးမကတြဲ့ကောငျ ၊ လူဖွဈပွီးအကြိုးမရှိတဲ့ကောငျ ၊ နငျသဆေိုသေ ၊ ရှငျဆိုရှငျ ၊ အသကျမပါလာတဲ့အကောငျ” ဆိုတဲ့စာသားတှကေို နမေငျးအိမျရဲ့ အသံခြိုခြိုလေးနဲ့ သီဆိုထားတာမို့ အရမျးနားထောငျလို့ ကောငျးတဲ့သီခငျြးလေးပါနျော…..
ဒီလောကျပါပဲ ( ဇငျအောငျ )
ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့ ရကျစကျသှားပုံကို သဘာဝတရားတှနေဲ့ ယှဉျပွီး တေးရေးဝကွေီးက ခပျသှကျသှကျပုံစံလေးနဲ့ ရေးဖှဲ့ပေးထားတာပါ။ “ နကေ အရှဘေ့ကျထှကျတယျ ဒါပမေဲ့ အနောကျရှသှေ့ားတယျ ၊ နငျက ခဈြတော့ ခဈြတတျတယျ ဒါပမေဲ့ ရကျစကျသှားတယျ၊ မကွငျနာလို့ ငါ့ကို ထားသှားတဲ့အခါ မငျးနှဈသကျရငျ ငါပြျောပါတယျ “ ဆိုပွီး ဇငျအောငျက စာသားတဈလုံးခငျြးစီကို ပီပီသသလေးသီဆိုသှားတာက အတျောလေးကို နားထောငျကောငျးတဲ့ သီခငျြးပါပဲနျော…
Related Article >>> ဟီရိုးအငျးလို စှဲလမျးစမေယျ့ သီခငျြးတှနေဲ့ စငျမွငျ့ထကျက Lana Del Rey
မတျောတဆ ( ကြျောဇငျမငျး )
ဒီသီခငျြးကတော့ အရမျးတှထေိရှလှနျးလို့ မငျမငျအထပျထပျ နားထောငျမိနတေဲ့ သီခငျြးလေးပါ.. တေးရေးဝကွေီးရဲ့ စာသားတဈကွောငျးစီတိုငျးက နားထဲတငျမက ရငျထဲပါ စှဲလှနျးလို့ မဖွဈမနေ နားထောငျကွညျ့သငျ့တဲ့ သီခငျြးလေးပါ ယောငျးရေ… “ ငါ့လောကျ ခဈြတဲ့သူလေ… နငျရှာဖှကွေညျ့ပါ… တကယျလို့မြား မတျောတဆဆုံတဲ့အခါ အဆငျမပွရေငျတောငျ နညျးနညျးတော့ပွုံးပွ”ဆိုပွီး ခဈြသူနဲ့ ပွတျပွတျသားသား မဖွဈသေးတဲ့ အခွအေနကေို ကြျောဇငျမငျးရဲ့ ကွညျလငျစူးရှတဲ့ အသံလေးနဲ့ သီဆိုပေးထားတာမို့ နားထဲစှဲလှယျတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးပါနျော…
ဒီတဈခေါကျမှာ မငျမငျစုစညျးပေးတဲ့သီခငျြးလေးတှကေ ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကနြိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့မိပါတယျ.. နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကစြမေယျ့ အကွောငျးအရာတှကေို တငျဆကျပေးဦးမှာမို့ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးနျော…
Tags: composer, feel, Fun, Music, myanmar, songs, wai gyi